Ndị mba ọzọ nwere ọgwụ mgbochi ọ bụla nwere ike banye US malite na Nọvemba 8
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ndị mba ọzọ nwere ọgwụ mgbochi ọ bụla nwere ike banye US malite na Nọvemba 8
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị ọbịa nwere ọgwụ mgbochi nwere ike banye na US malite na Nọvemba 8.
A ga-amata ọgwụ mgbochi COVID-19 nke Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) kwadoro na-ejighị ma ọ bụ nye ikike na US dị ka ụdị inoculation dị mma, na-enye ọkụ ọkụ maka AstraZeneca nke UK mepụtara, yana Sinopharm na Sinovac nke China.
US na-ebuli mmachi njem maka ndị ọbịa mba ofesi na-agba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke na COVID-19.
A ga-ahapụ ndị njem si mba ọzọ gbara ọgwụ mgbochi megide COVID-19 ịbanye US malite na Nọvemba 8
Iwu ọhụrụ nke US na -eduzi ahụike ọha, siri ike, na -agbanwe agbanwe, ka White House na -ekwu.
Houselọ White House kwupụtara taa na ibuli mmachi njem COVID-19, wee kwuo na ndị njem ala ọzọ niile nke nwere oke mgbochi megide coronavirus ga-ahapụ United States site na Nọvemba 8.
Onye ode akwụkwọ mgbasa ozi White House Kevin Munoz kwupụtara taa na "amụma njem ọhụrụ nke US nke chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi maka ndị njem mba ofesi na United States ga -amalite na Nọvemba 8."
Maazị Munoz biputere na Twitter na amụma ahụ "na -eduzi ahụike ọha, siri ike, na -agbanwe agbanwe."
Oke Mgbochi mgbochi njem USs mere ka ọtụtụ nde ndị ọbịa si China, Canada, Mexico, India, Brazil, ọtụtụ Europe pụọ na United States, mebiri njem nlegharị anya US, ma mebie akụnụba obodo.
N’ọnwa gara aga, White House kwuru na ọ ga -ebuli mmachi na ndị njem ụgbọ elu sitere na mba iri atọ, gụnyere China, India, Iran na ọtụtụ Europe site na mbido November, mana ọ kwụsịrị inye ụbọchị.
Na tusde, US Ndị ọrụ gọọmentị kwuru na mba ahụ ga-ebuli mmachi ngagharị na oke ala ya na ụgbọ mmiri gafee Canada na Mexico maka ndị gbara ọgwụ mgbochi ọ bụla.
Ọgwụ mgbochi COVID-19 nke ndị ụlọ ọgwụ kwadoro Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) nke anaghị eji ma ọ bụ nye ikike na US ka a ga-amata dị ka ụdị inoculation dị mma, na-enye ọkụ ọkụ maka AstraZeneca nke UK mepụtara, yana Sinopharm na Sinovac nke China.
Canada mepere ókèala ala ya na US na mbido Ọgọstụ iji nye ndị America ọgwụ mgbochi zuru oke maka ule COVID-19 na-adịghị mma maka njem na-adịghị mkpa. Enweghị nzaghachi sitere n'aka onye agbata obi ya, mere ka mkpesa sitere n'aka ndị ọrụ Canada.
Amachibidoro mmachibido iwu nke ọtụtụ ụmụ amaala na-abụghị ndị US na-abanye America ihe karịrị ọnwa 18 n'ihi ọrịa na-efe efe nke coronavirus. Onye isi ala mbụ Donald Trump machibidoro ndị njem ụgbọ elu si China na mbido 2020, wee gbasaa mmachi a na ọtụtụ Europe.
Ndị otu Njem njem US wepụtara nkwupụta na -esote na ọkwa na US ga -emepeghachi ndị njem mba ofesi ọgwụ mgbochi na November 8:
“Njem njem US akpọọla oku ka emepee ókèala anyị na nchekwa, anyị na -anabata ọkwa ọkwa Biden nke ụbọchị ewepụtara ịnabata ndị njem mba ofesi gbara ọgwụ mgbochi.
“Deeti ahụ dị oke mkpa maka ịhazi-maka ụgbọ elu, maka azụmaahịa na-akwado njem, yana maka nde ndị njem gburugburu ụwa, ndị ga-akwalite atụmatụ ịbịa United States ọzọ. Imepegharị ndị ọbịa mba ofesi ga-eme ka akụ na ụba jọọ njọ ma mee ka nloghachi nke ọrụ metụtara njem furu efu n'ihi mmachi njem.
"Anyị na -eto gọọmentị maka ịghọta uru njem mba ofesi na akụ na ụba anyị na obodo anyị, yana maka ịrụ ọrụ iji mepee ókèala anyị n'enweghị nsogbu wee jikọta America na ụwa."